Ọrụ ightlọ Ọfịs | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụ Transportlọ Ọfịs
23 / 05 / 2020 General, Akwụkwọ Ozi Okwu Mmalite
ọrụ ụgbọ njem ọfịs
Transportgbọ njem ọfịs A bịa na ọrụ, anyị nwere ike ikwu na otu ụlọ ọrụ ụgbọ njem agbanweela nke a bụrụ mpaghara site n'inye ọrụ a. Ihe ewu ewu, nke enwetara site na mmụba nke ọrụ njem ụlọ n'ụlọ, gbasaa ugbu a na mpaghara ebugharị ọfịs. Companieslọ ọrụ njem njem taa ebidola ijere ụlọ ọrụ dị na ngalaba a.
Yabụ kedu ka Ọrụ Na - aga Ọrụ na - aga Ọrụ?
Dị ka ọ bụla ọrụ ọdụ ụgbọ oloko Enwerekwa usoro na ọrụ ha. Ọ bụkwa usoro yiri njem ụgbọ ala. Agbanyeghị, usoro a bụ obere ihe zuru oke ma dịka ụlọ ọrụ njem, anyị ga-emeso ụlọ ọrụ, ọ bụghị mmadụ. N'akụkụ a, ịre ahịa na ngalaba nhazi nke ụlọ ọrụ na-eme ihe site na ịnọchite anya ụlọ ọrụ ahụ. Dịka Çolakoğulları ezinụlọ, anyị na-agbasi mbọ ike mgbe niile ịnye ndị ahịa anyị ọrụ ụgbọ njem dị mma.
Çolakoğulları njem, otu n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ njem kacha ochie nke na-abanye n'ọfịs njem ụlọ ọrụ; na-enye gị ịdị mma, ọrụ nchekwa ngwa ngwa. ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị n'ọtụtụ akụkụ nke Turkey, ọkachasị na ebe edepụtara n'elu banyere njirimara a 3 ịhọrọ ụlọ ọrụ anyị bụ nnukwu ihe.
Ọkachamara Office Transport Services
Dị ka ụlọ ọrụ ụgbọ njem Çolakoğulları; ọdụ ụgbọ oloko Anyị na-enye ndị otu kachasị mma, ihe kachasị mma na akụrụngwa anyị niile maka ndị ahịa ha na usoro ha. Anyị na-arụ ọrụ nke ọma na otu ihe dị mkpa, ọrụ nka. Nnukwu ihe mere anyị ji enwe mmetụta n’okwu a bụ; abụghị ime ka ihe ịtụnanya ma ọ bụ ihe ndọghachi azụ n’usoro njem njem nke ọfịs. Nnukwu uru nke ụlọ ọrụ anyị na ntanetị nhọrọ; Ọ bụ Ahụmahụ. N'ihi nke a, ndị otu ihe dị iche iche dị na ụlọ ọrụ anaghị arụ ọrụ ọrụ mbugharị ọ bụla. Ya mere, bido na ụlọ ọrụ ụgbọ njem ndị maara azụmahịa ahụ; mee atụmatụ na usoro nhazi site na-ekpebi ihe ndị na - agaghị akpatara ha nsogbu ọ bụla n'oge usoro njem njem ọfịs
Companylọ ọrụ na-eduga na Companieslọ ọrụ na-ebugharị Office
Companylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ njem ụgbọ ala kachasị amasị ma tụkwasị obi n'etiti ụlọ ọrụ njem njem niile. Kemgbe 1970, ọ chọpụtala ọtụtụ ndị ụlọ ọrụ na Turkey niile. Iji nweta akwụkwọ ndekọ nke ụlọ ọrụ anyị na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ anyị https://www.ofistasimaciligi.com.tr ị nwere ike ịbanye na adreesị anyị. Agụnyere ozi zuru ezu.
Nzukọ Ụlọ njem na Ụgbọ okporo ígwè na njem ụgbọ oloko jikọtara ọnụ
DTD Na-ejikọta Ụgbọ njem na Ụgbọ okporo ígwè na ihe ize ndụ Ụgbọ njem ememme
Onye ọhụrụ nke njem ụgbọ okporo ígwè TCDD Taşımacılık A.Ş.
Gogbọ njem ụgbọ mmiri na-agba n'okporo ụzọ n'etiti France na Great Britain…
Njikọ ejikọta ga-abụ ụdị njem nke ọdịnihu
Akçagöze - Başpınar Nlekọta Ndị Ọrụ Na - ahụ Maka Nlekọta Ndị Ọrụ Na - elekọta…
Ọkachamara Office Engineer
Nkwupụta Job: Ụlọ ọrụ Nkà na Ụzụ Njikere ga-akwụ ụgwọ (ka e zigara ya ọrụ Marmaray)
UTIKAD, Turkey mbụ Green Office (Green Office) ruru eru ndị na-abụghị ndị òtù ...
Ntụle na-atụ egwu: A ga-azụta Office Office
Ụlọ Metro na-akwụ ụlọ na ụgwọ ụlọ ọrụ na Umraniye
Nkwupụta Obi Ụtọ: Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ N'ime Usoro Ihe Ndị Na-edozi Ahụhụ (TÜVASAŞ)
Emegharịrị ọfịs okporo ụzọ ụlọ ọrụ
Ọnye na-bụ TLC Mürsel na Ebee?
ESHOT General Directorate ka emere ka o fee obodo Izmir n'ọtụtụ ebe dịka ọkụ eletrik, Mmiri, Gas na Ọha Ọha, esonyere na Izmir Metropolitan Mungi, yana ego agbakwunyere, [More ...]
Okporo ígwè Freight Association ịkwaga ha lekwasịrị anya na na Turkey
Nkwupụta Obi Ụtọ: Ụlọ Office Mezzanine Office Building (TÜVASAS)
SME na Mobile Office Caravan na Kandira
Oge ọhụrụ na IM CIM Transport Document Demiryolu na Railway Freight Ụgbọ njem
Ụgbọ njem okporo ígwè na North America mụbara n'April